सविना दिदीको कालो ब्रा - Nepali Sex Tube
सविना दिदीको कालो ब्रा
सविना दिदी निकै मिजासिली थिइन। मलाई भाइ भन्थिन म उनलाई दिदी भन्थे। सधै मेरो सपनामा लुगा खोलेर नाङ्गै आउँथिन अनि विपनामा पुरै लुगामा। उनको ब्रा भित्रको ती पोटिला दुध कति मिठो होलान्, उनलाई देखेपछि विचार आउँथ्यो। तर के गर्नु त्यो सपना सपनामै सिमित रहेको थियो।
उनी निकै पोटिली थिइन। ठूला ठूला साँप्रा थिए। अनि त्यहि आकारका दुध। उनले लगाउने कालो ब्राको स्ट्राइप कुम हुँदै ढाडसम्म पुगेको हुन्थ्यो। कहिले काँही सोधम सोधम् लाग्थ्यो, ‘सविना दिदी तपाई जहिल्यै कालै ब्रा किन लगाउनु हुन्छ?’
उनी पर्फ्युमकी बढो शौखिन थिइन। उनले कोठाको ढोका खोल्नासाथ उनको पर्फ्युमको बास्ना मेरो कोठासम्म आइपुग्थ्यो। अनि उनलाई सम्झदैँ छोल्ने गर्थे।
उनी रातीको लुगामा निस्कदा देखेको उनको सलसलाउँदो जिउ अनि गाउन भित्र छचल्किएका सविनाका दुध। चाट्नै मन लाग्ने उनका चिल्ला अनि लामा तिघ्रा। ओहो, सविनाको त्यो गुलावी ओठ, ती लामा घाँटी। उनको कपालको वास्नासुघ्न मेरो नाक त्यहि जितिएका थिए। सधैँ झै दिउँसो सविना दिदीलाई सम्झिदै हस्तमैथुन गर्न व्यस्त थिए।
‘अबुई !! के गेरेको तिमीले?’,ला! ढोका लगाउनै बिर्सेछ। सविना दिदी ख्यालै नगरी सरासर भित्रै आइपुगिछन्।मलाई के गरम के गरम भयो। हत्तपत्त ट्राउजर माथी ताने।’हत्तेरी, दिदी तपाइले बर्बाद गर्नुभयो नि!’, आफैलाई लाज लाग्दै थियो।’लु लु, केही भएन, यसरी दिउँसै त्यस्तो गर्नुहुन्न के भाई!’, उल्टै दिदीको मस्किन।सविना दिदीको विवाह भएको २ वर्ष बढी भइसकेको थियो। उनी उमेरले त्यस्तै २५-२६ पुगिन होलिन। तर उनका बुढा विहे भएको केही महिनामै जापान हिडेका, अहिले पनि उतै छन्। दिदि एक्लै कोठा लिएर बस्छिन्। उनको यस्तो प्रतिक्रिया सुनेर मलाई कताकताबाट जोश पो आयो। पुरै छोलेको भए त्यो जोश जाँगर आउथे न होला, दिदीले बिचैमा डिस्टर्व गरिदिएकी थिइन। त्यहि माथी स्वयम् सपनीकी राजकुमारीले नै मेरो लाडो देखेपछि त अब के अप्ठ्यारो रह्यो र?
‘अनि कहिले पो गर्नु र दिदी, एक्लै भएपछि के दिउँसो के राती?”छ्या कस्तो कुरा गरेको हौ तिमीले?’, दिदीले आफ्नै लवजमा हातको हाउभाउ दिदै जवाफ दिइन।’साच्चैको दुखेसो पो पोखेको त दिदी’, यसो भनिरहँदा म अझै खाटमै थिए।’धत् यस्तो कुरामा ध्यान दिनु हुन्न के भाई’, अलि लजाउँदै मस्किदै सम्झाउन खोजिन।’आज दिदीले नै रंङ्गे हात पक्रिनु भयो, अब त झन् यतातिरै ध्यान जान्छ नि’, मैले हाँस्दै भने।
‘भो, त्यस्तो कुरा नगर। म त तिमीलाई खाजा खान बोलाउन आ’को उ भने दिउँसै यस्तो गर्दै रहेछ। आज उता’, खाजा खान निम्तो दिएर उनी आफ्नो कोठातिर लागिन।कुनै बिलम्ब नगरी म उनको पछिपछि गएँ।उनले चिया बनाइन। म उनको खाटमा बसे। उनी पनि संगै बसिन। हामी चिया पिउन थाल्यौं।
‘अनि दिदीले आज मेरो इज्जत लुटिहाल्नु भयो, मलाई त कस्तो अप्ठ्यारो लाग्यो”तिमी आफै गर्छौ, मैले कसरी लुटे हँ’, उनले कर्के आंखामा मस्किदै भनिन। यसरी पटक पटक दिदी मस्किरहँदा मैले यहि कुरा बारम्बार गरिरहन उर्जा पाइरहेको थिए।
‘दिदी एउटा कुरा सोधम?”सोध न”मेरो कस्तो लाग्यो दिदीलाई?”छ्या, के सोधेको त्यस्तो नि!’, उनले यति छिटो कुरा बुझेकोमा मलाई लाग्यो दिदीले पनि यहि बारेमा सोच्दै छिन्।मैले फेरी सोधे, ‘भन्नु न दिदी, म पनि एउटा कुरा भन्छु नि अनि”के भन न”पहिले मेरो प्रश्नको जवाफ दिनु अनि”ह्या, तिमी पनि!”भन्नु न, कस्तो थियो, ठूलो सानो?”छि, छोड यस्तो कुरा”आ, भन्नु न के, अब देखेको कुरा भन्न नि के को अप्ठ्यारो हो र?’
‘ठूलै थियो, लु भयो अब!’, दिदी यति भनेर हाँसिन।’साच्चै ठूलो थियो त भन्या?’ मैले कुमले उनको कुममा हान्दै जिस्किए।’अँ के अँ’, उनले लाज मानिन।’तपाईको बुढाको भन्दा नि?”धत्, बुढाको कुरा नगर त”लु, के हुन्छ र के दाईको सानो छ हो?’उनी हाँसिन मात्र।’ए, अनि के भन्छु भन्थ्यौ त अघि!”नरिसाउने भए मात्र भन्छु”रिसाउँदिन भनन”अघि त्यस्तो गरिरहँदा तपाईलाई नै सम्झदै थिए क्या!’उनले यत्रो आंखा बनाएर मतिर हेरिन।’रिसाउनु हुन्न भनेर पो भनेको!’, मैले बेखुसी भएजस्तो गरि भने।
‘किन नि मलाई सम्झने?’
‘यस्तो राम्री, सेक्सी दिदीलाई नसम्झे अरु कसलाई सम्झने त?’, मैले उनको कुमलाई टच गर्दै भने।उनले कुरा मोडिन, ‘म सेक्सी छु र?’ केटीहरुलाई प्रसंशा भएपनि अरु चाहिन्न भन्थे हो रहेछ। मैले फेरी प्रशंसा नै थपे, ‘तपाई अति सेक्सी हुनुहुन्छ। आंखा, ओठ, घाँटी अनि सबै सबै कस्तो मिलाएर बनाएको जस्तो।’उनी मख्ख परेकी थिइन। तर मख्ख नपरेजस्तो गरि फेरी सोधिन,’सबै सबै भन्नाले?”सबै भन्नाले सबै नि दिदी, तपाई हात, खुट्टा, कम्मर, शरिर, ब्रेस्ट’।ब्रेस्ट भन्दा उनका आंखा अलिक ठूला भए। ‘एउटा कुरा सोधम ?”सोध न”मलाई सधै सोध्न मनलागिरहन्थ्यो के यो कुरा चाहिँ”ल त नि, धेरै नघुमाइ सोध”तपाई खाली कालो ब्रा मात्र किन लगाउनु हुन्छ?’उनी मज्जाले हाँसिन, ‘तिमी त के हो हँ, मेरो शरिर र लुगा हेर्दै बस्दो रहेछौ?’
‘भने नि, दिदी राम्री भएपछि नजर गइहाल्छ के, भन्नु न किन?’
‘तिमीले कहिले देख्यौ भन त”देखेको होइन, उ हेर्नुन तपाईको कुममा कालो स्ट्राप छ त।”हाहा, यो त समिज हो लाटा”अरे होर? अनि ब्रा?’दिदी हासिन मात्र। ‘के हो सविना दिदी, ब्रा नै नलगाउने तपाई’, मैले जिस्काएँ।’कसले भन्या लगाएको छैन भनेर?”अनि समिज लगाएपछि कसले लगाउँछ त ब्रा?”तिमीले त खुबै केटीको सबैकुरा थाहा पाएझै कुरा गर्यौ त अहिले त’, दिदीले उल्टै मलाई गिज्याइन।’खै त लगाएको भए?’ मैले पनि जिस्काएँ।
‘देखाउन मिल्नेकुरा हो र?”मेरो चाहिँ हेर्न हुने, तपाईले चाहिँ देखाउन नहुने। झन् दिदीले देखाउनुहोला भन्ने कत्रो आश गरेको”तिमी त साह्रै बिग्रेछौ कान्छा’, उनले ठट्यौली गर्दै भनिन।’दिदी हेर्छू नि, एक पटक,प्लीज”हेर दिदीसंग यस्तो भन्ने हो?’
‘दिदीलाई सम्झदै त्यस्तो गरेको भन्दा चाहिँ केही नभन्ने अहिले चाँही दिदीसंग यस्तो भन्न पाइन्छ रे, तपाईको कुरा पनि बुझ्नै नसकिने के दिदी। एक पटक त होनि, देखाउनुस् न, प्लीज।’
दिदीले एकटकले मतिर हेरिन। ‘खै तिम्रो देखाउ अनि देखाउँछु।’
बस् मलाई के चाहियो। अघि नै देखि ठन्किरहेको लाडो ट्राउजरबाट सुत्त बाहिर निकालिदिए।
दिदीले च्याप्प समातिन। ओहो, कस्तो करेन्ट लाग्यो जिऊ भरी। मैले दिदीको दुधका पोका बाहिरैबाट झम्टे। उनले केही भनिनन्। अलिक नजिक आएर मेरो लाडो हल्लाउन थालिन।
‘लौ तिम्रो इच्छा पुरा भयो, अघि आफै हल्लाउँदै थियौं, अब मैले हल्लाइदिए।’
उनको कान नजिकै गएर सानो स्वरमा भने, ‘इच्छा त केके छ के के दिदी।’ उनको कान टोकिदिएँ।
उनले लिङ्ग मज्जाले अचेटिन अनि जोडजोडले हल्लाउन थालिन। उनको त्यो नरम हात भित्र लाडो भित्र बाहिर गर्न थाल्यो।
‘दिदी टिसर्ट फुकाल्नु न’
‘फुकाल्देउ न’, सेक्सी स्वरमा कान नजिकै आएर बोलिन।
टिसर्ट फुकाल्दिएँ। भित्र कालो समिज थियो। त्यो पनि फुकाले। भित्र साँच्चै कालो ब्रा पनि रहेछ। टाइट ब्राबाट उनको दुध जरुक्क उठेका देखिन्थे। ब्राको बाहिरबाटै उनको दुध मुसारे। दिदीले ब्राको हुक खोलिन।
‘बाफरे, कत्रा ठुला दिदी तपाइको दुध’
‘छ्या के बोलेको होला, बोल्न छोड केके गर्ने हो गर छिटो’, दिदीलाई आत्तरी भएजस्तो छ।
‘गर्ने नि दिदी आज दुध पुति सबै चिक्ने हो।’ एक हातले दुध समात्तै, अर्को दुध चुस्दै दिदीको ट्राउजर भित्र हात हाले।
‘ओहो, तिमी त कति फर्वाड हो। हतार छ र?’
‘छ नि दिदी कति बेला पुति चुसम भ’को छ’
‘छ्या तिमीले बोल्न नि केके जानेको हो।’
‘गर्दा मज्जा आएजस्तै बोल्न नि मज्जा हुन्छ के दिदी। कति लाज मान्नुहुन्छ के तपाई। बरु मेरो लाडो चुस्नु न’
‘के को छ्या?’ उनको पुति भित्र एउटा औला हालेर चलाए। उनी निहुरिइन। अनि बढो मजाले लाडो मुखमा हालेर भित्र बाहिर गर्न थालिन। मलाई असिमित आनन्दा आउँदै थियो।
केही मिनेटसम्म दिदीको मुखमा चिकिरहेँ। अनि उनको ट्राउजर फुकालेर पुति चुस्न थाले। ओहो त्यो पर्फ्युमको बास्नाको त के कुरा असली बास्नादार चिज त त्यो पो रहेछ। दिदीको पुतिको स्वादले जिब्रो भरियो। दिदी खाटमा लम्पसार परिन, ahhhhhhhhh भाइ छिटो छिटो….
ठन्किरहेको लाडो ल्वात्त दिदीको पुतिभित्र छिर्यो। उनी जोडले चिच्याइन। ohhhhhhhhhhhhhhhhh auuuuuuuuuuuuu
‘ल्वात ल्वात ल्वात……..’
‘ohhhhhahhhhhhhh भाइ छिटो छिटो, hard………………..owwwwwwwwwwww’
सविना दिदीको ती उत्तेजक आवाजले अझै जोस आउथ्यो। म अझै उनी माथी मच्चिन्थे।
‘प्याट प्याट प्याट…….’
चुडिएला झै उनको दुध निमोठदै कति समयको सपना विपनामा परिणत गर्दै थिए। सविना दिदीको बास्नादार कोठको खाटमा उनको पुति चिक्दै गए। उनको ठूला स्तन निमोठ्दै गए, मुसार्दै गए। घरी उनको ओठ टोक्न पुग्थे। घरि उनको जिब्रोले मेरो मुख चिक्थ्यो, घरि मेरो जिब्रोले उनको मुख। उनका हरेक अंगअंगको मज्जा लिदै थिए।
उनको पुतिमा लाडो ठोक्किदाको आवाज अझै कडा हुँदै थियो, ‘प्वाट प्वाट प्वाट…..’
लाडोको रफ्तार बढेसंगै दिदीको खाटको आवाज पनि बढ्दै थियो। उनी त झन् रातो कामुक अनुहारमा चिम्लिएको आंखा लिएर उत्तेजित हुँदै थिइन, ‘awwwwwwwhh ahhhhhhh…..uuuuuuuuuuuuuuuu……
१५-२० मिनेटसम्म लगातार दिदीको पुतिमा लाडोले बल लगायो।
‘भाई बाहिर बाहिर’…… दिदी कराईन.
मैले स्वात्त बाहिर निकाले। दिदीले बाघले बाख्रा झम्टिएझै झम्टिइन। स्वात्तै मुख भित्र हालिन। मैले पुतिमा भन्दा जोडले दिदीको लालुपाते ओठभित्र लाडो हुले। अनि सकेको बलले भित्र बाहिर गरे। उनलाई सास फेर्न समेत अप्ठ्यारो भएको थियो। म भने जोड जोडले उनको मुखै फुट्ने गरि लाडो हुल्न थाले। केही छिनमै लाडोले भएजति सबै फुसी दिदीको मुखमा झार्यो। दिदीले जम्मै निलिन। म लखतरान भए। उनले लाडोको जम्मै फुसी चाटि चाटि सबै सकिन। उनको नाङ्गो दुधमा मुख जोतेर अंगालोमा राखिन। त्यसपछि हाम्रो नियमित सेक्स हुँदै आएको छ। उनको बुढा अझै जापानमा छन्, म भने यता उनको बुढीमाथी चिकामारी खेल्दैछु। दिदीलाई म भएकाले गज्जब भएको छ, बुढा भएर पनि के गर्नु, पुति यतै भएपछि लाडो पनि यतै खोज्न नै त पर्यो।
भर्खर उम्रेको दुध मुसार्दै १४ वर्षे केटी चिक्दा
हाकिमले मेरो चाकमा हानेर